Ny olana lehibe, ny fanehoan-kevitra, ny vahaolana dia nanazava: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 June 2019	• 6 Comments
Matetika aho no miresaka momba ny fara-tampony Olana, fihetsika, vahaolana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia efa nisy ny tranga famonoan'olona maro sy tranga hafa tao amin'ny fampahalalam-baovao izay tsy maintsy ekentsika fa ireo asa ara-tsaina (PsyOps) ireo dia hilalao amin'ny vahoaka. Ao amin'ny lahatsoratra maromaro no nanazavako ny lalao Olana, fihetsika, vahaolana asa ary ahoana no mety ho nampiharina tamin'ny tranga famonoan'olona malaza indrindra tamin'ny vanim-potoana vao haingana. Noho izany, izaho, ohatra, tena manoro hevitra anao ity lahatsoratra ity en ity lahatsoratra ity Tsara ny mamaky indray alohan'ny hanohizana eto. Ilaina tokoa ny mianatra ny lahatsoratra roa sy ny horonan-tsary napetraka ao.
Ireo tranga rehetra ireo sy ny fampiasana ny hafetsena sy ny famitahana ataon'ny haino aman-jery, mba ahafahan'ireo vahoaka hankasitraka ny lalàna hentitra kokoa sy ny fepetra bebe kokoa ataon'ny polisy, dia nanentana ahy hanao hira ho azy. Azonao atao ny mahita ny horonantsary (trano fandraisam-bahiny) ao amin'ny lahatsary etsy ambany.
Ny fitsipika Olana, fihetsika, vahaolana dia midika fa ny governemanta, miaraka amin'ny media, dia manasongadina ny olana goavana amin'ny vahoaka. Indraindray, misy olana momba ny zavaboary; noforonina tamin'ny alalan'ny teknolojia afovoan-tsarimihetsika toy ny teknolojia greenscreen, deepfakes, ny famerenana mivantana sy ny rindrambaiko face-swap. Raha tsindrio amin'ny lahatsoratra mifandraika etsy ambony, dia hahita fanazavana amin'ny antsipiriany momba ireo teknika ireo ianao.
Ny volombava dia miondrika amin'ny zavatra manentana ny fihetseham-pon'ny toetrandro ary manampy amin'ny famoahana fihetseham-po amin'ny vahoaka ny media. Ny teknika lalina dia ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy. Olona an-jatony maro no manara-maso ny fifanakalozan-kevitra feno ary miafina ao anaty tamba-jotra azo itokisana amin'ny tambajotram-pifandraisana matanjaka azo itokisana, afaka manery adihevitra an-tserasera amin'ny tari-dalana iriana ianao ary manafika izay rehetra manana hevitra hafa. Azo atao ny manakorontana ny fihetsik'izy ireo eo amin'ny vahoaka, saingy mety hibaiko ihany koa. Satria mandefa fihetseham-po eo anivon'ny vahoaka amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao ianao ary manara-maso ny media sosialy amin'ny alàlan'ny tafika troll, dia manomana ny vahoaka amin'ny lalàna vaovao izay tsy neken'izy ireo na oviana na oviana na oviana na oviana io olana manokana io (ny PsyOp).
Te-hanao hira iray aho mandritra ny fotoana fohy, satria mozika matetika no tsara kokoa noho ny lahatsoratra. Mety hahita azy io ianao na hampiasa azy io raha toa ianao ka manandrana mampiseho ny fomba fitantanana vaovao tsy marina momba azy.
Tags: deepfake, deepfakes, face, face swap, endrika, Featured, miray feo, vaovao diso, asa, olana, ara-tsaina, psyop, fanehoan-kevitra, reenactment, rindrambaiko, vahaolana, hira, fitsipika, Ampifamadiho ny, nanazava, Video
14 June 2019 ao amin'ny 08: 04
Raha mamaky ny valiny ao nu.nl aho dia ny vahaolana dia mandidy 💉😉
Raha ny tena izy, heveriko fa ny 7 amin'ny 10 dia tsy mino ny teboka ankehitriny sy avy eo.
miavona ny mpiasan'ny nanoratra hoe:
14 June 2019 ao amin'ny 14: 14
Lmfao nu.nl ... izany no pejin-tseraseran'ny haino aman-jery ... 10 taona lasa izay dia namokatra izany marina izany, ankehitriny dia SIDA madio. Tahaka an'i TPO amin'ny fotoana iray, misy ny famerimberenana noho izy ireo miteny shit satria malahelo loatra izy ireo ary manompo sampy. Izany no mahatonga azy ireo ankehitriny hanivana fanehoan-kevitra ary ianao dia afaka mamaly raha mpikambana ianao amin'ny alalan'ny fanomezana.
Tena sangisangy mafy ianao rehefa mihazakazaka manaraka ny media sy ny politika, karazana fitaovana messiah miandry mpamonjy iray. Manan-jiolahy 70 taona ianao miaraka amin'ny Stockholm Syndrome izay ninoany tamim-pitandremana ny fiainany manontolo. Tsy mety ho 7 / 10 izay te-haka vaksiny tsy maintsy atao. Heveriko fa ny olona dia amin'ny vaksinina (mbola adala) saingy tsy ilaina.
Tsy tokony hiandry olona iray hamaha ny olana aminao ianao ... fotsiny fa ny fikorontanam-pahefana maharitra nohariana ka na ny elitre aza tsy afaka mifehy. Tohizo fotsiny ny fandaharam-potoanan'ny korontana izay efa nitombo nandritra ny taona maro ny elitika
14 June 2019 ao amin'ny 11: 03
Tsara ... manambany izany ...
Manana ny feoko eo amin'ny lohako isan'andro aho!
Noho izany ... olona izay miasa amin'ny lehiben'ny manampahefana, ohatra:
Aza mihaino ny feo, indrindra fa afaka mihira am-pitiavana mandritra ny andro ianao, mba tsy hifantohan'ny mpiara-miasa amin'ny asany ny fitazonana ny rafitra! Imagine ...
14 June 2019 ao amin'ny 12: 00
Baudet: Atsaharo ny fifindra-monina sy ny tsy fandeferana. Afaka miaro amin'ny fifandimbiasam-peo mahatsikaiky amin'ny israel ve ianao? ... israel izay mandefa mpifindra monina any Eoropa. Lmfao ... manohitra ny EU ihany koa izy ireo amin'ny fvd ary avy eo mandray anjara amin'ny parlemanta EU. Sangisangy.
14 June 2019 ao amin'ny 16: 42
Ao amin'ny faritra misy ahy dia maheno feo mifangaro amin'ny hiran'i Martin aho; avy amin'ny tena tsara ho ratsy.
Araka ny hevitro sy ny manandrana ny hira dia kely dia kely, nefa mihevitra aho fa mahatalanjona ilay gitara!
Raha tsy izany, ity hira ity dia tsy famokarana natao tao amin'ny studio tsara, izay ahafahan'ny teknôlôjia ny zavatra rehetra azo atao mba hahatonga ny feo manontolo tsaratsara kokoa. Ankoatr'izay, Martin dia tsy mavitrika ara-barotra, saingy manana iraka iray ihany: mba hampisehoana ny olona fa miaina any am-ponja tsy hita maso izy ireo, fa izy ireo kosa dia manampy amin'ny fitazonana sy fanitarana io fonja io.
Fa inona no tena zava-dehibe amin'ny eritreritro? Martin dia namorona sy naneho ny heviny ary nanohy hatramin'ny farany ny valiny amin'ny Internet. Ny olona marobe dia manao izany amin'ny tenany manokana, fa i Martin kosa dia andian-tafika iray mitondra ny troll lehibe, izay nanararaotra ny fotoana rehetra hanaratsiana azy noho ny antony hampangina azy.
Rehefa mijery manodidina aho dia mahita olona vitsivitsy izay sahy manamboatra sy maneho hevitra. Ny vahoaka dia mitondra "araka ny tokony ho izy". Ankoatr'izay, ny fandehan'ny fotoana dia manakana ny olona hanana fahafahana hamorona sy hanehoana ny fahaizan'izy ireo ny rafitra. Ny hetsika ara-tsosialy ara-tsosialy dia miankina amin'ny tontolo iainan'ny olona iray. Na izany aza, ny fitondran-tena mahaliana ara-tsosialy rehetra dia vokatry ny fitondran-tena sy ny indoktrination, izay miankina amin'ny toe-tsaina ankapobeny amin'ny fotoana sy ny kolontsaina. Ny zava-tsarotra dia ny mahita fa io toe-tsaina ara-potoana sy kolontsain'ny ankamaroany io, miaraka amin'ny fitondrantena tadiavina, dia voafehin'ny mpitondra ankehitriny, izay mifehy ny rafitra manontolo manerantany. Ny lalàna dia miantoka ihany koa fa ny fahamarinan'ny faminavinana ny fitaratry ny olona dia mihamitombo, mba hahafahan'ny tarika mifehy tsara kokoa.
Ireo olona izay miaina "araka ny tokony ho izy" dia mbola tsy mahatsikaritra fa miaina tanteraka ny fomba tian'ny mpitondra. Ireo olona ireo dia ondry mahafinaritra na trondro maty izay mandeha amin'ny rano. Ireo trondro maty ireo dia tsy dia manao na inona na inona ratsy, satria izy ireo no zombies velona, ​​izay voafehin'ny rafitra tanteraka. Ny trondro maty, izay avo kokoa, dia nahavita nanipy ny rafitra ary matetika mitsambikina amin'ny endriny na ny kirany, no trondro marevaka sy mahia maty. Mifampiarahaba ireo trondro ireo rehefa mamitaka ireo zavatra ireo amin'ny fitsiriritana na tanjona hafa mifototra amin'ny tena. Ankoatr'izay, ireo hery ireo dia tsy hianjera ireny volom-borona fotsy ireny, satria ireo fotsy fotsy ireo dia fepetra ahafahana mifehy ny vahoaka amin'ny alalan'ny lalàna sy fitsipika. Ny drafitra mpanatanteraka ety ambany, toy ny mpiasa sy mpanome tolotra hafa, matetika dia tsy mahatsapa ny fandaharam-potoana (lehibe) anompoany.
Hahita olona vitsy dia vitsy no sahy maneho ny tena maha izy azy (araka ny efa hitany). Mpisolovava iray avy amin'ny birao mendri-piderana dia tsy hametraka haingana toy izany ao amin'ny aterineto haingana toy izao ... na izany aza, tsy marina izany. Trondro maty toy ity dia manana tontolo sandoka noforonina amin'ny sehatr'izy ireo mba hanohana ary hampiseho ny tena toetrany amin'ny fomba mihetsi-po.
Ao amin'ny NAZI Alemana dia nisy ihany koa ireo olona izay tsy nitovy tamin'ny tokony ho izy tao anatin'ny telopolo taona. Ireo olona ireo dia vita tsy ho vita. Ny fotoana iainantsika ankehitriny dia azo ampitahaina amin'ny faramparan'ny taona 1930 tany Nazi Germany. Fantatry ny rehetra ny zava-nitranga tamin'i Alemaina sy ny sisa tany Eoropa. Ny vahoaka dia tsy maniry ny hiaina ao anatin'ny fotoana fohy. Ireo olona izay mitazona ny rafitra dia ny "go-geters" miaraka amin'ny "toe-tsaina mihevitra" izay mitondra "araka ny tokony ho izy". Raha mbola mitoetra ho hery mitaingina an'io vahoaka io ny rafitra, ny Tontolo Vaovao dia ho zava-misy.
Fihinanan-tanana mankany Martin ... trondro iray velona izay manjary ho azy irery!
14 June 2019 ao amin'ny 16: 49
Ary rehefa tonga eo amin'ny fihirana dia mangatsiaka be dia tsy tena manampy, fa tsy te handany ora maro hanatsarana izany aho.
Iza no mahalala, angamba mety hanao izany aho aoriana.
Na izany aza, aleoko mifantoka amin'ny fanoratana lahatsoratra mazava.
Misaotra anao namaly valiny mahafa-po!
« Ny fandravana ny fametrahana ny marika 'marina', Trump, Brexit (ary ny zavatra mifandray amin'izany) dia nanomboka
Raha tanteraka ny faminaniana dia porofon'ny fahamarinanao ve ny finoanao? »
Total visits: 113.215